Iincwadi ezi-3 zokonwaba | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ziya konwaba
UCarmen Guillen | | Iincwadi, Iincwadi
Ngokuqinisekileyo i-priori, nje ukuba ufunde isihloko salo nqaku, uye wacinga ukuba elinye inqaku libaluleke ngakumbi apho bacebisa kwaye bacebise iincwadi ezithile zohlobo lokuzinceda olungenamsebenzi ngeli xesha lenyaniso. Ubungalunganga! Ndingowokuqala ukubaleka ezi ndidi zeencwadi, ke ngekhe ndicebise nantoni na ukuba andizifundanga, andingomhanahanisi okanye umthengisi wezithuthuthu.
Into endikucebisayo zezi Iincwadi ezintathu zokonwaba, okanye ubuncinci, sisiphelo ekubonakala ngathi bayasilandela ... Ayilulo uhlobo "ukwenza oku ukuba ngcono" kodwa ngenxa yotshintsho neendlela zobomi abakhokelwa ngabalinganiswa babo kwibali elisibalisayo, wena qaphela ukuba ubomi bukulungele ukuba ubulinde kwaye nguwe ekufuneka ubufumene.
Ndizifundile ezimbini kwaye ndikhangele phambili ekubeni neyesithathu kuba uphononongo endilufundileyo lulungile. Ukuba ufuna ukonwaba kancinane ngokufunda ezi ncwadi, nantsi isishwankathelo kunye / okanye isinqumlezo ngasinye sazo.
1 "Umonki othengise iferrari yakhe" nguRobin S. Sharma
2 "Siddhartha" nguHermann Hesse
3 «Ulonwabo olutsha» nguCurro Cañete
"Umonki othengise iferrari yakhe" nguRobin S. Sharma
UMonk oThengise iFerrari yakhe libali elixhasayo nelishukumisayo likaJulian Mantle, igqwetha eliphumeleleyo elinobomi obuxinzelelekileyo, obungalinganiyo kunye nobomi obugqithisileyo obugcina bumenze wahlaselwa sisifo sentliziyo. Le ntlekele ibangela ukuba uJulian abe nengxaki yokomoya ekhokelela ekubeni ajongane nemicimbi emikhulu yobomi. Ngethemba lokufumana iimfihlelo zolonwabo kunye nokukhanyiselwa, kubekiwe uhambo olungaqhelekanga kwiiHimalaya ukufunda ngenkcubeko yamandulo yamadoda azizilumko. Apho ufumanisa indlela yokuphila eyonwabisayo, kunye nendlela emvumela ukuba asebenzise amandla akhe apheleleyo kwaye aphile ngokuzimisela, ukuzimisela kunye noxolo. Ibhalwe njengentsomi, le ncwadi iqulethe uthotho lwezifundo ezilula nezisebenzayo zokuphucula indlela esiphila ngayo. Ukudityaniswa ngamandla kobulumko bokomoya baseMpuma kunye nemigaqo yempumelelo yeNtshona, kubonisa inyathelo ngenyathelo indlela yokuphila ngenkalipho ngakumbi, uvuyo, ukulinganisela kunye nolwaneliseko.
Ndiyifunde ngokwamaqela amabini kunye neqabane lam kwaye kuyinyani ukuba ivule iindlela ezintsha kunye neendlela zokuphila hayi kuphela ubomi bokuphila kodwa nokujongana nazo, ngamanye amaxesha ezona zinzima. Ifundwa kwiintsuku ezimbalwa kwaye ikhonkco kakhulu.
"Siddhartha" nguHermann Hesse
Akuthandabuzeki enye yeencwadi zam endizithandayo kwaye esele ndithathile ukufundwa. Kunconywe kakhulu kwabo basazibuza ngeenjongo kunye neenjongo zokuphila ubomi abasinika bona ...
Inoveli ebekwe kwi-Indiya yendabuko, ibalisa ngobomi bukaSiddhartha, indoda leyo indlela yenyaniso idlula kuyo ngokulahla kunye nokuqonda umanyano olusisiseko sayo yonke into ekhoyo. Kumaphepha ayo, umbhali ubonelela ngazo zonke iindlela zokomoya zomntu. UHerman Hesse ungene ngaphakathi empuma ukuze azise izinto ezintle kuluntu lwethu. I-Siddhartha ngowona msebenzi ubalulekileyo kule nkqubo kwaye ube nefuthe elikhulu kwinkcubeko yeNtshona kwinkulungwane yama-XNUMX.
«Ulonwabo olutsha» nguCurro Cañete
Uhambo lokungabuyi. Ukudibana kwakhona nexesha elidlulileyo. Uphando olubanzi nolungqongqo lobuntatheli kulonwabo. Ibali lothando lokuqala, iintlungu zokuqala. "Ulonwabo olutsha" Ayisiyoncwadi nje ngokubaluleka kokuba nesibindi ebomini, ukuhlala ngaphandle kwemaski kunye nokuzifumana. Ngokusekwe kwiziganeko zokwenyaniEli libali lohambo olungaqhelekanga oluya ngothando nenkululeko.
"Bekuza kwenzeka ntoni ukuba endaweni yokuthetha ngolonwabo senze konke okusemandleni ukuba sonwabe?" Kubuza uCurro, ophambili kweli bali, intatheli esencinci ebunzimeni obomi bayo bujika xa, ngomhla wokuzalwa kwakhe, efika ePlaya Blanca, eLanzarote, apho athe wagqiba ekubeni athathe umhlala phantsi kangangexesha elithile, athathe ikhefu, kwaye aqale ukubhala inoveli yakhe yokuqala. Kodwa into yokugqibela ayicingayo kukuba eli hlobo liza kuba yindawo ebalulekileyo yokutshintsha, azibone ejikelezwe ngabantu angabaziyo ngaphambili, kwaye ephila iimeko ezingaqhelekanga eziya kuguqula ikhosi yeentsuku zakhe ngonaphakade.
Uya kudibana kwakhona nomntakwabo owafa kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, xa ngengozi wafumanisa isihobe esabhalwa nguye esilahlekile kwisutikheyisi yakhe, kwaye naye uya kuqala indlela eya kuthi izinto ezenzeka ngexesha elinye zigqame njengeenkwenkwezi nalapho uloyiko olwalubambekile. uyakunika inyathelo kwinkalipho eya kukunceda ukuba uphile ubomi bakho okokuqala.
Ndikulindele phambili ekubeni nayo emandleni am "ukuyingcamla" kancinci.
Ngaba ukhe wafunda enye yazo? Ngaba uyavumelana nam xa ndisithi ezi ncwadi zizokonwabisa ngakumbi? Yeyiphi okanye nangaphezulu onokusicebisa ngayo? Impelaveki emnandi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi ziya konwaba
Carmen othandekayo, ndinguCurro, kwaye ngoku ndifunde eli nqaku. Enkosi kakhulu ngengcebiso yakho, nangokunika incwadi yam ithuba kunye nokuthetha kuloo miqathango. Enkosi!!!!!
Ukuhanjiswa koncwadi unanamhla
Iingqungquthela zeLatin American (II)